के रमेश प्रसाई र नन्दाले वच्चालाई जन्म दिएका हुन् ? पहिलो पटक आफ्नो सन्तानको बारेमा बोलीन् नन्दा, कस्ता छन् रमेशका सन्तान हेर्नुहोस् यो खुशी परिवारको भिडियो – Gazabkonews
के रमेश प्रसाई र नन्दाले वच्चालाई जन्म दिएका हुन् ? पहिलो पटक आफ्नो सन्तानको बारेमा बोलीन् नन्दा, कस्ता छन् रमेशका सन्तान हेर्नुहोस् यो खुशी परिवारको भिडियो
१८ वर्षकी प्रेमीकालाई कोठामा राख्ने हैसियत थिएन भन्दै रोए सन्तोष, तर आज करोडपति बने , आफ्नो घर गाडी र बंगलामा मस्तीका साथ जिन्दगी बिताइरहेका छन्, पत्निलाई यसले पाल्दैन भन्दै माइतीमा नै फिर्ता लगेको दिन सम्झेर दुवै भ क्कानिए, हेर्नुहोस् भिडियो
प्रभु बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन : प्रभु बैंक लिमिटेडले जेठ ११ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदर पाइने ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज (जेठ २६ गते) अन्तिम दिन हो।बैंकले प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशनमा ल्याएको हो।
सोमध्ये १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको १६ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको हो भने बाँकी २४ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गरिएको छ। सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरिएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएकोमा २ हजार ५०० कित्ता बाँडफाँट गरिएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी १५ लाख ९७ हजार ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
सो ऋणपत्रको अवधि १० वर्ष रहनेछ। लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले सी आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरुबाट सो ऋणपत्र खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।ऋणपत्र निष्काशनका लागि गराएको क्रेडिट रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले बैंकलाई मध्यम क्रेडिट रिस्क जनाउने इक्राएनपी आईआर त्रिपल बि ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने तथा कर्जा जोखिम मध्यम भएको संस्था हो भन्ने जनाउँछ।
लगानीकर्ताहरु प्राय कुराहरुमा सहमत हुँदैनन् तर, उनीहरु बजारमा पैसा कमाउन केही नियम वरिपरि दृढ रणनीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुन्छन्।केही समयका लागि आफु लगानीकर्ता भएको सुरुवाती दिनहरु सम्झनुहोस्। यदि तपाई अधिकांश अरुजस्तो हुनुहुन्छ भने, तपाई निकै थोरै ज्ञानका साथ बजारमा प्रवेश गर्नु भएको थियो। जब तपाईले खरिद गर्नु भएको थियो तब ‘बिड–अस्क स्प्रेड’ के हो थिएन, र तपाईले स्टक उकालो लाग्दा निकै चाँडै बिक्री गर्नु भयो या ओरालो लाग्दा निकै तल बेच्नुभयो।
यदि तपाईसँग आफुले राम्ररी बनाएको लगानीका नियम छैन भने, अब त्यसको लागि समय भइसकेको छ, र त्यसको सबैभन्दा उत्तम सुरुवात भनेको जो लगानीका क्षेत्रमा सफल भइसके उनीहरुलाई सोध्नु हो। यहाँ केही चर्चित लगानीकर्ताहरुका नियम प्रस्तुत गरिएको छ। १) डेनिस गारमेनः जितेकालाई कुद्न दिनुस्डे निस गारमेनले सन् १९८७ देखि ‘द गारमेन लेटर’ प्रकाशित गर्न थालेका थिए। यो हेज फण्ड, ब्रोकरले फर्म, म्युचुअल फण्ड र अन्य साना तथा ठूला ट्रेडिङ्ग फर्महरुका लागि विश्व पूँजी बजारको एक दैनिक कमेन्ट्री थियो। गारमेन एक कुशल ट्रेडर र वित्तीय नेटवर्कका बारम्बार अतिथि पनि हुन्।
‘जित्ने ट्रेडहरुमा धैर्य गर्नुस्, हारेको ट्रेडमा झन् धेरै धैर्य गर्नुस्। जबसम्म हाम्रो घाटा कम छ र नाफा धेरै छ, तबसम्म यो याद राख्नुस् कि हामीले लिएका निर्णयहरु ३० प्रतिशत मात्र सही भएपनि हामी ट्रेडिङ्ग अथवा इन्भेष्टिङ्गको धेरै गुणा बढी नाफा कमाउन सक्छौँ।’माथि उल्लेखित उनका नियमले अधिकांश युवा लगानीकर्ताहरुले गर्ने गल्तीलाई सम्बोधन गर्दछ। पहिलो, नाफामा पहिलो संकेतमा नै बिक्री नगर्नुस्, जितेकाहरुलाई कुद्न दिनुस्। दोस्रो, हारेको ट्रेडले
पलायन हुन नदिनुस्। जो लगानीकर्ताहरु बजारबाट केही पैसा बनाउनछन्, उनीहरुल केही हदसम्म गुमाउनु ठिकै छ, तर धेरै गुमाउनु ठिक होइन।